Mukurumbira iRima's Dark Shadow | Martech Zone
Mukurumbira iRima's Dark Shadow
Chishanu, February 13, 2009 Mugovera, January 8, 2011 Douglas Karr
Nhau dzizere nedzimwe dzinoshamisa nyaya dzevanhu munguva pfupi yapfuura
Alex Rodriguez inobvuma kune steroids (zvinoshamisa yakasiiwa kubva kuMLB.com's AROD nhau peji)
Michael Phelps mifananidzo poto yekupfungaira. Iye akazorasikirwa nemvumo yakakura yekubvumirana neyaKellogg's.
Kunyangwe Barack Obama anga aine mavhiki mashoma akaomarara, kuyedza kutsvaga nhengo dzemakurukota uye kusundira nepakeji inokurudzira izvo zvinonyura mukurumbira.
Kune zvakajairika. Mumwe nemumwe wevanhu ava aive pamusoro penyika. Vakanga vari masimba ekupedzisira - hapana aigona kana kusvika pedyo nekuvadenha.
Chiremera ndechimwe chezvinhu izvo munhu anogona kuwana pasina mukurumbira. Vese vatatu vevarume ava vaive vanhuwo zvavo vasati vawana simba risingawanzo. Vakawana zvinangwa zvaive kure kupfuura zvaitaridzika kuva zvinowanika kune vanhuwo zvavo seni neni.
Mukati megore, Mutungamiri Obama akatama kubva kuna junior Senator kusvika kuhofisi yepamusoro (zvine nharo) munyika. Mumakore gumi, AROD yakakura ikave yepamusoro uye yakabhadharwa kwazvo nyanzvi baseball mutambi. Mumakore manomwe, Phelps akazove muOlympian akashongedzwa zvakanyanya munhoroondo, isingazivikanwe pamberi pe10 Olimpiki yekupedzisira
Mukurumbira wakafanana nemumvuri. Inogara iripo uye inogara iinewe. Ipo zuva richipenya kumeso kwako, riri shure kwako uye, pamwe, rakanganikwa. Kana iwe uri munhu chaiye, hapana munhu anoteerera mumvuri wako. Nekudaro, iwe paunenge wakamira pamusoro peboka revanhu, unokanda mumvuri.
Munyika ino umo zvese zvatinoita zvakanyorwa uye zvinowanikwa kune wese munhu, isu tichafanirwa kujairira vanhu vari vanhu. Hapana mumwe wedu akakwana, uye hatife takazosvika pakukwana.
Sezvo iwe uchivavarira kuvaka chiremera, usangokanganwa kuti une mukurumbira kunze uko wekusimudzira.
Iwe Ungabhadhara Zvakadii pa Twitter?
Iyo Imwe Traffic Inobva muGoogle Analytics?
Feb 13, 2009 at 10:08 PM
"Apo zuva riri kupenya kumeso kwako, riri kumashure kwako uye, pamwe, kukanganwa ... kana iwe wakamira pamusoro peboka revanhu, unoisa mumvuri chaiwo."
Hongu… uye neInternet mumvuri iwoyo uchave nevateereri ve3 Bhiriyoni Vanhu nekumhanya kwechiedza. Zvakanyanya kuoma kuita zvikanganiso uye kuzvivhara izvozvi. Kufambiswa kwemashoko kunoitika pakarepo.
Kukadzi 13, 2009 na5:28 PM
“Unhu hwakaita somuti uye mukurumbira somumvuri wawo. Mumvuri ndizvo zvatinofunga nezvazvo; muti ndicho chinhu chaicho.” Abraham Lincoln
Iwe uri muboka rakanaka nemafungiro ako! 😉
Kukadzi 13, 2009 na6:13 PM
Ndanga ndichinyatsofunga kunhonga bhuku paLincoln. Mamwe eHistory Channel anoratidza nguva pfupi yadarika akaita kuti ndinamirwe. Thanks zvikuru nekugovera izvi! Ini handina kukodzera kurumbidzwa zvakadaro.
The Blogger Source
Kukadzi 14, 2009 na11:29 PM
Vese Michael naARod vaive sarudzo dzehupenzi, Mutungamiriri, aine sarudzo zhinji dzaanofanirwa kuita, anosungirwa kuwana mashoma asina kururama.